तपाई सैराहा जादैँ हुनुहुन्छ ? झुकिएर पनि हर्न नबजाउनुहोला – Saurahaonline.com
तपाई सैराहा जादैँ हुनुहुन्छ ? झुकिएर पनि हर्न नबजाउनुहोला
चितवन, १ पुष । चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । शनिबारबाट लागु हुने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । आज हात्ती महोत्सवको बारेमा जानकारी दिने उदेश्यले आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा यसबारेमा जानकारी दिईएको हो ।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवनका प्रमुख सन्तोष पन्तले सौराहा क्षेत्रलाई हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका हुन । शनिबारबाट बाट यही पुस १५ गते सम्म प्रचार प्रसार अबधीको रुपमा लिई जनचेतना जगाउन र स्थानीय स्तरमा सन्देश प्रबाह गर्न थालिएको पन्तले बताए ।
हर्न बजाउँदा हुने ध्वनी प्रदुष्णको कारण मानिसमा मात्र जनावरमा पनि असर पर्ने भएकाले यस्तो कदम चलाएको बताईएको छ । यस अघि चितवनको नारायणगढ,भरतपुरका मुख्य सडकहरुमा भदौं १ गते देखि नै हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिसकिएको छ ।